Our network : CFAO Motors Zimbabwe - CFAO AUTOMOTIVE
CFAO Motors Zimbabwe is a subsidiary of CFAO Automotive, the leading automotive network in Africa and in the French overseas territories.
CFAO Motors Zimbabwe, "Driving with confidence".
Based in Zimbabwe since 2007, CFAO Motors Zimbabwe is the exclusive distributor of the prestigious global brand Volkswagen. It sells a wide range of new passenger vehicles and light commercial vehicles.
CFAO Motors Zimbabwe has currently one Dealership in Zimbabwe which is based in the capital city, Harare – expansion into a number of Zimbabwe’s other main cities is planned in order to offer its customers greater responsiveness and availability.
CFAO Motors Zimbabwe leverages the logistics capabilities of the CFAO Group, particularly its storage platforms in Europe, to ensure availability and short delivery lead times for vehicles and spare parts.
A team of 28 highly qualified, competent professionals work together to deliver customer satisfaction and service excellence while respecting the demands of automakers and complying with international standards.
Boasting a spacious facility and leading-edge technology, CFAO Motors Zimbabwe offers a comprehensive range of customer support services before, during and after a sale, meeting its customers’ every need:
To help make customers’ projects a reality, CFAO Motors Zimbabwe offers credit solutions developed with partner banks.
To provide reliable service in accordance with the highest standards and guarantee long-lasting products, CFAO Motors Zimbabwe only uses original spare parts made by the marques it distributes.
CFAO Motors Zimbabwe offers its customers round-the-clock breakdown assistance.
CFAO Motors Zimbabwe provides a broad spectrum of after-sales services using state-of-the-art technology which uses advanced communications with Volkswagen in Germany to offer flawless service capacity and support
All brands Volkswagen & Volkswagen CV